Horjooge kaloo ka tirsanaa al-Shabaab oo isa soo dhiibay
Waxaa weli sii socdaan isa soo dhiibka xubnaha iyo horjoogayaasha sar-sare ee ururka nabad-diidka ee al-Shabaab iyadoo dhawaan saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya ay dhawaan degaanka Baar-sanguuni ee Gobolka Jubbada hoose ku soo bandhigeen Xuseen Xasan Cambeer, oo horay ugu tirsanaa ururka al-Shabaab.
Ninkaan isa soo dhiibay ayaa al-Shabaab u qaabbilsanaa abaabulka waxa ay ugu yeeraan kooxda jugta culus. Abaanduulaha guutadda 11-aad Qeybta 43-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Gaashaanle Sare, Ismaciil Sheekh Isxaaq, ayaa sheegay in ninkani uu ahaa sarkaal sare oo al-Shabaab ka tirsanaa, islamarkaana ka dagaallami jiray Gobolka Shabeellada hoose.
Korneyl Ismaaciil Sheekh Isxaaq, ayaa sheegay in isa soo dhiibista Xuseen Xasan Cambeer, ay timid markii uu dagaal la galay kooxo kale oo daacad u ah al-Shabaab, taas oo u suurto gelisay in uu si nabad ah isu soo dhiibo.
Hooyo iyo saddex carruurteeda ah oo qarax Shabaab ku dhaawacay
Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda qarax ka dhacay makhaayad ku taallo magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galgaduud halkaasoo ay ku dhaawacmeen 5 qof oo afar ka mid ah ahaayeen hooyo iyo saddex carruurteeda ah.
Kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shaabab waxay baraha internet-ka ku sheegtay inay laysay maleeshiyaad mushrikiin ah. “Mujaahidiinta ayaa howlgallo khasaara lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka Mushrikiinta ka fuliyay magaalada Dhuusamareeb ee wilaayada Galguduud,” ayuu lagu daabacay bar internet oo xiriir la leh ururkaas diinta ka been sheegay.
Xaqiiqadase dhabta ah ayaa ah in hooyo shaax ku karineysay makhaayaddaas iyo carruurteeda ay ku dhaawacmeen qaraxaas. In hooyo masaakiin ah oo carruurteeda u shaqeyneysay lala beegsado qarax oo dabeetana baraha lagu sheego in qarax lagu laayay mushrikiin iyo murtaddiin waa shey looga bartay al-Shabaab waxayna tusineysaa munaafaqnimada kooxda. Waa arrin laga xumaado in calooshood u shaqeystayaal soo xirtay shaar diineed ay iska daadiyaan dhiigga muslimiinta masaakiinta ah ee aan wax galabsan.
Qiilka uu Shabaab u raadiyo dilka uu u geysto shacabka
Ururka dilaaga ah ee ummadda Soomaaliyeed u diiday nolol iyo horumar ee al-Shabaab wuxuu qarax la beegsaday dad shacab ah oo ku sugnaayeen hoteelka Cascasey ee ku yaallo magaalada Kismaayo halkaasoo ay ku naf waayeen ilaa 27 qof, halka kuwa kaloo badan ay ku dhaawacmeen.
Cod lasoo galiyay bar internet oo xiriir la leh ururkaas ayuu afhayeenka “milatariga” al-Shabaab, Cabdicasiis abuu Muscab, ku sheegay in dagaalyahannada ururkaas ay goobtaas ku laayeen murtaddiin iyo in hoteelkaas uu ahaa dhismo loogu talo galay in lagu shirqoolo ummadda Soomaaliyeed.
Waa arrin looga bartay ururkaan diinta ku been abuurtay in uu dad masaakiin ah uu laayo oo uu dadkaas ugu yeero mushrikiin. Wuxuu ururkaan dilaaga ah raadiyaa qiil iyo sababta uu u daadiyo dhiigga muslinka, iyadoo codkaas uu afhayeenka ku sheegay in dadkii weerarka lagu laayay ay ahaayeen Soomaali baasaboorada shisheeye sita kuwaas oo dowladaha ay metelaan ugu dhaartay in ay shacabka Soomaaliyeed diintooda iyo dhaqankooda ka fitneeyaan.
Sida uu afhayeenka sheegay, ujeeddada dadkii la laayay ayaa ah in ay diinta ka saaraan ummadda Soomaaliyeed taasoo tusineyso xadka munaafaqnimada al-Shabaab ay gaartay. Dad muslin ah in la laayo oo haddana been laga sheego waxay tusineysaa xaaladda quus ee ku jiro ururka al-Shabaab waana arrin layaab leh.
Waxaase hubaal ah in shacabka Soomaaliyeed ay si wanaagsan u garanayaan naxariis darrada iyo dilalka aan kala sooca laheyn ee uu ururka ay munaafaqiinta hoggaaminayaan ee al-Shabaab uu u geysto ummadda Soomaaliyeed. Weerarkaas waxaa lagu dilay Hodan Naleeye oo aheyd wariye caalamka u soo bandhigi jirtay wajiga quruxda badan ee dalkeenna Soomaaliyeed iyadoo barta YouTube-ka ay ku laheyd chanel lagu magacaabo Integration TV.